ग्रीका एयर कन्डिसन गुणस्तरीय भएकाले ग्राहकको पहिलो रोजाइमा - Sabal Post
पछिल्लो समय लकडाउन पुर्णं रुपमा नहटेपनी बिस्तारै बजार क्षेत्र खुकुलो हुदै गइरहेको छ । तर यस बर्षको शुरु देखी नै ब्यापार ब्यबसाय शुन्य जस्तै हुदा धेरै ब्यबसायीहरु निराश भैरहेका छन् । यसै बिचमा गर्मीयाममा बिभिन्न सरकारी कार्यालयदेखी ब्यबसायीक सघंसस्था हुदै घरायसी प्रयोगसम्म ह्वात्तै बिक्रि बढाउदै लगीरहेको ग्री कम्पनीका एसीहरुको होलसेल तथा रिटेल ब्यबसाय सन्चालन गरेको इरोस इन्टरप्राइजेज भैरहवाका सन्चालक प्रवेश श्रेष्ठसग हामीले सक्षिप्त कुराकानी गरेका छौ ।
१ – लकडाउनले सबै क्षेत्रमा प्रभाब पारेको छ , तपाइहरुको बजार चाही कस्तो छ ? बिश्व आक्रान्त बनीरहेको यो बेलामा ब्यबसायको कुरा धेरै पछाडी परिरहेको छ । यो बर्ष एसीको राम्रो ब्यबसाय होला भनेर सोचेका थियौ तर कोरोना सक्रमण बढेकाले सरकारले गरेको लकडाउनले हामीजस्ता साना ब्यबसायीलाइ पनी धेरै असर गर्यो । अहिले बजार क्षेत्र हल्का खुकुलो भएपनी ब्यबसायमा बन्दि लागेको छ यदपी हाम्रो ग्री कम्पनीका एसीहरुमा भने आम सर्बसाधारणको चासो भने घटेको छैन । ग्रीका एसि कन्डिसन किफायती र गुणस्तरीय भएकाले ग्राहको पहिलो रोजाइमा परेको छ भन्ला अत्युक्ती नहोला ।
२ ) एसीको बजार अबका दिनमा कस्तो होला ? हामीले बिगत ४ बषदेखी भैरहवाबाट नै ग्री कम्पनीका एसिहरु बिक्रि बितरण गरेका छौ । भ्रमण बर्ष २०२० लाइ तार्गेट गर्दै बिभिन्न उच्चस्तरका होटलहरु पनी लुम्बिनीमा खुल्दै गइरहेका थिए । होटलमा लगानी थपिदै जादा यस क्षेत्रमा पनी हाम्रो बजार बिस्तार हुदै गइरहेको थियो । तर अहिले आएर बजार स्लो भएको छ । आशा छ आगामी दिनमा फेरी हाम्रो बजार माथी उठ्नेछ । फेरी, हामीले सामान मात्रै बेच्दैनौ बिक्रीपछीको सेवालाइ पनी प्राथमिकता दिएका कारण यस क्षेत्रमा इरोस इन्टरप्राइजेजले आफ्नै बजार बनाउन सफल भएको छ र सबैको रोजाइमा ग्री कम्पनीका एसीकै माग बढी छ ।
३) ग्री कम्पनीकै एसि किन प्रयोग गर्ने त ? अहिले पहिलाको जस्तो समय छैन । मानीसले घर बनाएपछी डेकोरेशन गरेर एसी फिट गरेर आरामदायी सग बस्न चाहान्छ । फेरी लग्जरीयस गुड्स मानीएको एयर कन्डिसन स्वास्थ्यका हिसाबले पनी लाभदायीक छ भन्नेकुरामा धेरै अनबिज्ञ छन । हेल्थबारे सचेत हुनेहरुले एसीको प्रयोग गर्ने गरेका छन त्यसमा पनी बजारमा थुप्रै ब्रान्डका एसीहरु छन । तर किफायदी भरपर्दो भएकाले चाइनाको ग्री कम्पनीका एसीहरु नै रोज्ने गरेका छन । जसमा हामीले भैरहवाबाट होलसेलमै सामानहरु उपलब्ध गराउने गरेका छौ ।
गोर्खाली युवा सशक्तीकरण संस्थाले खोल्यो बुटवलमा कपडा…
अमेरिकाले हाल्यो हुवावे कम्पनी र त्यसका व्यवस्थापकविरुद्ध…
जेसिजको महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएका मानन्धरको मृत्यु